လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ကျပ် ၂၁၇၅ ဘီလီယံနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ကျပ် ၁၁၃၁ ဘီလီယံထ?? - Yangon Media Group
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ကျပ် ၂၁၇၅ ဘီလီယံနှင့် ကျန်းမာ ရေးကဏ္ဍတွင် ကျပ် ၁၁၃၁ ဘီလီယံထိတိုးမြှင့်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေကပြောသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က နေ ပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ရှင်းလင်းတင်ပြရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် ပညာရေးဘတ်ဂျက်ကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် ၁၇၂၆ ဘီလီယံအား လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် ၁၇၅၆ ဘီလီယံအား လည်းကောင်း သုံးစွဲခဲ့ပြီး လာမည့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ယခင်နှစ်များ ထက်ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး ကျပ် ၂၁၇၅ ဘီလီယံသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် ၈၈၁ ဘီလီယံအားလည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် ၁ဝ၇၆ ဘီလီယံအား လည်းကောင်း သုံးစွဲခဲ့ပြီး လာမည့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ယခင်နှစ်များထက် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး ကျပ် ၁၁၃၁ ဘီလီယံသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးရ ပြီးကတည်းက မျှော်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ လောကပါ လတရားတွေရရှိစေပြီး နိုင်ငံရေး တရားမျှတမှု၊ စီးပွားရေးတရားမျှ တမှု၊ လူမှုရေးတရားမျှတမှုစတဲ့ အခွင့်အရေးသာတူညီမျှဖြစ်တဲ့ ဝါဒရေးရာဖြူစင်တဲ့ အားလုံးအ မြတ်တနိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြည် ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်မတိုင်မီ အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက် တန်းကျောင်း၊ အသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်း စုစုပေါင်း ၃၆ ကျောင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၉၃၃ ဦးတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရေးကောလိပ် များကို ၂ဝ၁၉- ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်မှ စတင် ၍ လေးနှစ်သင်ပညာရေး ဒီဂရီ ကောလိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းအပြင် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ကျန်းမာရေးဘတ် ဂျက်တိုးမြှင့်သကဲ့သို့ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုများလည်း တိုး မြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်း ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၁၆ ခုတင် ဆံ့တိုက်နယ်ဆေးရုံ ၁၁ခု၊ ကျေး လက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ၁၈ ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ ၂ဝ ခုနှင့် တိုင်းရင်းဆေးရုံ ၁၆ ခုကို အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆေးရုံ ခုနစ်ရုံအား အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ သားဖွား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ကျန်း မာရေးမှူး စုစုပေါင်းကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၁၂၄၂၁ ဦးအသစ်ခန့် ထားခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အ ခန်းပေါင်း ၃၆၄၄ ခန်းပြီးအောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်နိုင်မှသာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အာမခံနိုင်မည်ဟု နို??
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားထား ၊ လိုအပ်ပါက အ
မုဒိမ်းမှုဖြင့် တရားစွဲခံရတော့မည့် ရုပ်ရှင်သူဌေးကြီး ဟာဗေးဝိန်းစတိန်း
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရန် ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းမည့်အဆိုအပေါ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမညီညွတ်ဟု တပ်
ပဲခူးနှင့် ဧရာဝတီတို့ရှိ တောဆင်ရိုင်းများကို ရေဒီယိုကော်လာများ တပ်ဆင်ပြီး စောင့်ကြည့်သွာ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးဝင်နေသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ?